कस्को कांग्रेस, कस्तो कांग्रेस ? « Anumodan National Daily
कस्को कांग्रेस, कस्तो कांग्रेस ?
प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०४:४८
स्थानीय तह पहिलो चरण निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएको छ । एमालेहरू उत्साही छन् । माओवादी केन्द्रले असन्तोष नै मानिहाल्नु पर्ने कारण नै देखेन । पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी साझा पार्टी र विवेकशिल पार्टीमा उत्साहको सिमा छैन । दोस्रो संबिधानसभाको अंक गणितलाई आधारमान्दा नेपाली कांग्रेसले दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो पार्टीको आशनमा रहेका कांग्रेसीहरूलाई दुःख अवश्य लागेको हुनुपर्छ । तर, यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खुसी छन् । किनभने उनका सत्ता सहयात्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबार छिर्ने बाटो खोलीदिए । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
प्रचण्डले आफैप्रति धाप मार्दै उच्च ‘राजनीतिक नैतिकता’ देखाएर राजीनामा दिएको हुँ भनेका छन् । शक्ति र सत्तामा छदा राजनीतिलाई भ्रष्ट र विकृत बनाएका देउवाको अन्तिम सत्तारोहण ०५९ मा थियो । संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएपछि सत्ताबाट हटेका थिए उनी । प्रचण्डको स्वघोषित उच्च राजनीतिक नैतिकताको जगमा १२ बर्षपछि चौथो पटक उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
देउवा यसअघि तीन पटक कसरी प्रधानमन्त्री भए ? उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला मुलुकले के–के भोग्नु प¥यो ? विगत असाध्यै धमिलो छ, अमिलो लाग्छ । उनको विगतलाई हेरेर भन्दा देउवा प्रधानमन्त्री हुर्दै गर्दा नेपालीहरूले एउटै कामना गर्नपर्ने हुन्छ,‘फेरि देउवाको पालामा बिडम्बनापूर्ण इतिहास नदोहोरियोस्, थप विकृति नजन्मियोस् ।’ संसदीय राजनीतिलाई भ्रष्ट र विकृत बनाउनमा देउवाको योगदान सबैभन्दा बेसी छ भन्दा उनीप्रति अन्याय हुनेछैन ।
देउवाले के गरेनन् ? वा उनको पालामा के भएन ? यहाँ त्यो लेख्दा निकै लामो हुन्छ । यति भन्न सकिएला, सत्ताको लागि नेपालको संसदमा किनबेचको संस्कृति उनलै भित्राए । केवल सत्ताका लागि कांग्रेस फुटाए । दरबारलाई प्रजातन्त्र बुझाए । सत्ताको लागि विदेशीहरूलाई हस्तक्षेपको लागि आमन्त्रण गर्ने पनि उनै हुन् । स्वार्थको लागि स्वातन्त्र न्यायलयमाथि आक्रमणको नेतृत्वकर्ता पनि उनै हुन् । बाहिरबाट हेर्दा शेरबहादुर देउवा विपी कोइरालाले बनाएको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापति हुन् । तर, यो केवल सायरी मात्रै हो । सच्चाई यो हो, सत्ताको लागि जे पनि गर्न बिपीको पार्टीमा आएका नेता हुन् । तर, यतिका समयपछि पनि उनैै देउवा किन पार्टी प्रमुख हुन्छन्, किन प्रधानमन्त्री हुदैंछन् ? हामी कहाँको कस्तो लोकतन्त्र कस्तो छ ? हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं, त्यो अर्को ‘डिस्कोर्स’को बिषय होला । तर, यो आलेखमा देउवा र कांग्रेसको मात्रै चर्चा गरिएको छ ।
२५ फागुन ०७२, देउवा कांग्रेसको सभापति निर्वाचत हुदै गर्दा उनीप्रति अवश्य पनि कार्यकर्ताहरूको धेरै अपेक्षा थिए । कोइराला विरासतको कांग्रेसमा देउवामा आउदै गर्दा एउटा परिवारबाट कांग्रेस निस्किएको विश्लेषण हुदै थियो । तर, यस अवधिमा जे गतिबिधि भए, जे गरिए कांग्रेसकै नेताहरूले भन्न थालेका छन्, कांग्रेस बूढानीलकण्ठ दरबारभित्र छिर्यो । कांग्रेसको लोकतन्त्र बूढानीलकण्ठ दरबार भित्र कैद भएर बस्न अभिसप्त छ । यी देउवा तिनै देउवा हुन् जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसलाई कोइरालाकरण गरेको भन्दै पार्टी फुटाए । तर, सभापति भएको बर्षदिन बित्दा मात्रै कांग्रेसको लोकतन्त्र बूढानीलकण्ठ दरबार भित्र छिरेको निकष्र्षमा पुगेका छन्, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर ।
लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र कानुनी राज्यको कांग्रेसको आर्दश हो । तर, लोकमान विरुद्ध नउभिएको कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउने कामको अगुवाई गरे । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि औला उठाएन स्वतन्त्र न्यायलयमा नयाँ कोतपर्व मच्चाउने असफल प्रयास गरे ।
बिडम्बना यस्तो छ, पौडेल पक्षको गुनासो गर्छ, ‘कांग्रेस बूढानीलकण्ठ दरबार थुनियो ।’ देउवा पक्षकै नेताहरूको दुखेसो छ, ‘बूढानीलकण्ठ दरबार भित्रको देउवा पत्नी आरजु देउवालाई रिझाउन नसक्नेले कांग्रेस भएर बस्न कठिन छ ।’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,‘कांग्रेस त पार्टी जस्तै लाग्न थाल्यो, पार्टीमा गरेको इतिहास देखाएर होइन बूढानीलकण्ठ दरबारमा पैसा दिएर वा दाइनो बनाएर मात्रै अब अबसर पाइन्छ ।’ कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार पत्नी आरजु राणाले खुलेआम दलाली गर्छिन् । मोलतोल तोक्छिन् । उनलाई भाईहरू भूषण राणा, प्रदीप राणा तथा प्रमोद राणाले यो मोलमोलाइमा सहयोग गर्छन् । पार्टीभित्रको योगदान, मुल्य मान्यता र आर्दश विस्तारै मिथक बनिरहेको अनुभुती कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा भएका निर्णय र गरिएका नियुत्तीहरू हेर्ने हो भने ती केन्द्रीय सदस्यको भनाई प्रमाणित हुन्छ । ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । मन्त्रिको नियुक्ति, राजदुत नियुक्ती, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती, सरुवा–बढुवा यी सबैमा बूढानीलकण्ठ दरबारले गरेको सिधा हस्तक्षेपको फेहरिस्त हेर्दा जो कोही कांग्रेसीलाई सभापति देउवाको कार्यकर्ता भएकोमा हिनताबोध भएको हुनुपर्छ ।
कांग्रेसको इतिहास निकै लामो छ । कांग्रेसीहरू भन्छन्,‘राणाको निरंकुशताविरुद्ध लड्यौँ, पञ्चायतविरुद्ध भिड्यौँ । राजाको निरंकुशताविरुद्ध लड्यौं ।’ विपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झेर कांग्रेसीहरू गर्व गर्छन् । हो, परिर्वतनका आन्दोलनहरूमा कांग्रेसको योगदान छ । इतिहासका अनेक कालखण्डमा कांग्रेसलाई नेपाली जनताले अवसर दिएकै हुन् । ती नेताहरू इतिहासमा श्रद्धेय छन् । तर, उसले कहिल्यै त्यो अवसरलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकेन । उपलब्धी र प्राप्तीलाई कहिल्यै संस्थागत गर्न सकेन । ०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाई पायो । बिपीको राजासँगको टकराबले ०१७ साल घट्यो । प्रजातन्त्र गुम्यो । देश पञ्चायती अन्धकारमा फस्यो । २०४६ देखी २०६२÷०६३ सम्म आइपुग्दा यो क्रम चलिरह्यो ।
०४६ सालयता आजसम्म कांग्रेसले यो मुलुकको ११ पटक नेतृत्व गरिसकेको छ । ५५ सय ६४ दिन कांग्रेसले अगुवाई गरेको छ । एमालेले ४ पटकमा १४ सय १२ दिन । यसबिचमा कांग्रेसले राजनीतिक परिवर्तनको लागि लडेको तथ्य भुल्न मिल्दैन । त्यो कांग्रेसको उज्यालो पाटो त छदैछ । तर, आज कांग्रेसले जे गरिररहेको छ, ती कांग्रेसको उज्यालो पाटो विस्तारै अध्यारो सुरुङ्ग भित्र छिर्दैछ । यदि कांग्रेसभित्रका असल र इमानदार नेताहरूको बलमा उद्धार नभए त्यही अध्यारो सुरुङ्ग भित्र बिलिन हुने सम्भावना नजिक छ ।
यही कांग्रेस जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध २ कात्तिक ०७३ मा संसदमा महाभियोग दर्ता हुँदा बोलेन । बरु, यो वा त्यो कोणबाट असन्तोष प्रकट ग¥यो । लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेसकै कारण अघि बढेन । त्यत्तिकै तुहियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकमानलाई पदमुक्त नगरीदिएको भए सायद के हुन्थ्यो ? भन्न सकिने अवस्था थिएन । कसै–कतैको दबाब खेप्न नसकेर सम्भवतः कांग्रेसले लोकमानलाई बचाउथ्यो । किनभने, देउवा भारतको आदेशलाई इन्कार गरेर जाने अवस्थामा थिएन । छैन ।
लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र कानुनी राज्यको कांग्रेसको आर्दश हो । तर, लोकमान विरुद्ध नउभिएको कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउने कामको अगुवाई गरे । स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि औला उठाएन स्वतन्त्र न्यायलयमा नयाँ कोतपर्व मच्चाउने असफल प्रयास गरे । खुल्ला खुलस्तै छ, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो अनुकुल काम नगरीदिएकै कारण कांग्रेस विरुद्धमा उभियो । प्रहरीभित्र तेस्रो वरीयताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने स्वार्थ र चाहनालाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएकै कारण प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध उभियो कांग्रेस । यो कार्की विरुद्धको होइन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आर्दश विरुद्धको महाअभियोग थियो । आज कांग्रेसलाई इतिहासले जरुर प्रश्न सोधिरहेको छ, यो कस्तो कांग्रेस हो ? लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता र आदर्श कांग्रेसले किन भुल्दैछ ?
कस्को कांग्रेस ?
फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्तेयरले भनेका छन्, ‘हे भगवान् ! मलाई मित्रहरूबाट बचाऊ, दुश्मनहरूसँग सामना गर्न म आफैँ सक्षम छुु, ।’ हो, नेपालीहरूको दुःख पनि भोल्तेयरकोसँग ठ्याक्कै मिल्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले ९ महिना नेपालले भारतीय हस्तक्षेप र स्वार्थलाई अस्वीकार गरेकै हो । देशमा नाकाबन्दी थियो । देश इतिहासकै कष्टमय अवस्थामा थियो । जनताले इन्धन पाएका थिएनन् । अस्पतालमा औषधि सकिँदै थियो । बन्दले सुत्केरी आमाहरूले अस्पताल जान पाएका थिएनन् । सुत्केरी आमा मरिरहेका थिए । तर, कांग्रेसले औपचारिक रुपमा त्यसलाई भारतीय नाकाबन्दी भन्न मानिरहेका थिएनन् । के थियो कांग्रेसको बाध्यता ?
इतिहास साक्षी छ, यही कांग्रेसका श्रद्धेय नेता विपीले जसले ०१५ सालको निर्वाचनमा पछि भारतीय सास्ती खेपे । भारतीय अपमान सहन नसकेर मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ साल पुस १६ गते नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किन अघि विपीलाई गिरिजाप्रसादले भनेका थिए, ‘नेपाल जानु हुँदैन मारिदिन्छन् ।’ तर बिपी भारतीय अपमान सहन नसकेर मृत्युदण्ड वा जेलमै सडाएर मार्न सक्ने त्रासकाबिच पनि देश फर्किए । हो, त्यही बिपीको कांग्रेस आजको अवस्था यो छ । सबैले सोधेका छन्, ‘नेपालीको कांग्रेस हो या अरु कुनै कांग्रेस ?’
तथ्यहरू खुला खुलस्तै छ, गएका ओली नेतृत्वको सरकार रहदा खासगरी भारतको लागि इतिहासकै सकसपूर्ण थियो । आफ्ना सबै संयन्त्र र शक्तिबाट नभएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायतदेखी युरोपेली संघसम्म पुगेँ । बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनलाई मनाएर नेपाल बिरुद्ध वक्त्तव्य जारी गरे । युरोपेली संघसँग गठजोड गरेर वक्क्तव्य जारी गरे । सबै खालका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल बिरुद्ध लबिङ चलाए । तर, सरकार कति पनि बिचलित भएन । प्रधानमन्त्री दृढताको साथ नेपाली स्वाभिमानको पक्षमा बोलिरहे । विदेशी हस्तक्षेपलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरे । गरिरहे । त्यही सरकार ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कामको अगुवाई कांग्रेसले नै ग¥यो । ओली सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पाश नहँुदै यता काठमाडौैंस्थित भारतीय दुताबासले भोज ग¥यो, उता राकेश सुदले भारतीय पत्रिकाहरूमा प्रचण्ड सरकारले गर्नुपर्ने कामको सुची सहितको आलेख लेख्यो । त्यही जगमा बनेको सिमा सहितको प्रचण्ड सरकार । हो, आज त्यही जगमा फेरि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । स्पष्ट नै छ, यो कस्तो सरकार हो ?